Markab ku soo caariyay Xeebaha Gobolka Bari | Dhacdo.com
Home Wararka Maanta Markab ku soo caariyay Xeebaha Gobolka Bari
Markab ku soo caariyay Xeebaha Gobolka Bari
Markab kalluumeysi oo nooca jariibka ah ayaa gelinkii dambe ee shalay ku soo caariyay meel u dhow Xeebta Badweynta India ee tuulada Cadaayo ee deegaanka Qunbax ee Gobolka Bari.
Caaqil Axmed Yaasiin oo ka mid ah waxgaradka ku dhaqan tuulada Cadaayo ayaa sheegay in markabka uu ku soo caariyay meel qar ah, isla-markaana ay xalay qaylo dhaan soo dirsadeen dadkii markabka la socday, oo Soomaali ay ku jirto.
Caaqil Axmed Yaasiin ayaa sheegay in saakay loo gurmaday dadkaasi, ayna suurtagashay in doomo looga soo daad-gureeyo markabka. Afar ka mida dadka la soo badbaadiyay ayuu sheegay inay ahayd Soomaalidii ilaalo ahaanta ula socotay markabkaasi, oo laga leeyahay dalka Masar.
Mid ka mid ah shaqaalihii Masaarida ee markabka la socotay ayuu sheegay in saakay uu geeriyooday, ka dib markii ay la degtay mid ka mid ah doomihii lagu soo samata-bixinayay.
Caaqil Axmed Yaasiin oo la hadlay VOA ayaa xusay in markabkan uu ka mid ahaa illaa toban markab, oo muddo sanad iyo bar si sharci-darro ahi uga kalluumeysaneysay aagga deegaanka Qunbax.
Ka hor xilliga bad xiranka oo hadda lagu jiro ayaa waxa uu sheegay in dhib badan lagu qabay maraakiibta dalka Masar laga leeyahay, kuwaa oo xilliyada qaarkood rasaas ku furi jiray dadka, sida uu yiri.
Caaqilka ayaa intaa ku daray “Kalluumeysiga dadka Soomaalida hadda wuu ka xiran yahay, xilligaan ma mari karaan badda, maraakiibta waaweyn uun baa mari karta, xilligan badda waa xilli xagaa weeye, badda waa xiran tahay, laakiin xilligan ayay maraakiibta waaweyn ka faa’iideystaan, oo meelo dhow bay ka gurayaan aargoosatada.”
Caaqilka ayaa ugu dambeen xaqiijiyay in markii ugu horeysay ay tahay muddo 25 sano ah in markab kalluumeysi uu ku soo caariyo Xeebaha Cadaayo ee deegaanka Qunbax.